Teletalk Pvt. Ltd. Archives - Technology Khabar
» Teletalk Pvt. Ltd.
काठमाडौँ । टेलिटक प्रालि उपत्यकाबाहिर साओमी फोनको आधिकारिक वितरकमा नियुक्त भएको छ । त्यसै गरी अनलाइनमा सस्तोडिल डटकम बाट वितरण गर्नका लागि टेलिटक प्रालि नियुक्त भएको छ । टेलिटकले आफ्ना […]
साओमीको राष्ट्रिय बितरकमा टेलिटक थपियो, हालको भन्दा सस्तो मूल्यमा साओमी फोन पाईने(मूल्यसहित)
काठमाडौं । कलर्स र जिओनी मोबाइल ब्राण्डको कारोबार गर्दै आएको टेलिटक प्रालिले अब साओमी (Xiaomi) ब्राण्डको मोबाइलको पनि कारोबार शुरु गरेको छ । कम्पनीले यहि सातादेखि काठमाडौं उपत्यका भन्दा बाहिर […]
काठमाडौं। कलर्स मोबाइलले एस सिरिज अन्तर्गत नयाँ स्मार्टफोन बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । नेपाली मोबाइल ब्राण्डको रुपमा परिचित कलर्सले एस ११ स्मार्टफोन सार्वजनिक गरेको हो । चीपसेट निर्माता कम्पनी मिडिया […]
कलर्सको ‘एस १’ मोडलको स्मार्टफोन बजारमा, बजेट मूल्यमा प्रिमियम डिजाइन
काठमाडौं, १९ मंसिर । कलर्स मोबाइल नेपालले नयाँ एस सिरिजमा ‘एस १’ मोडलको स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ। कम्पनीले प्रिमियम स्मार्टफोनको अनुभव दिलाउन बजेट मूल्यमा नयाँ फोन ल्याएको हो । कम्पनीले […]
काठमाडौं, १२ पुस । कलर्सले नयाँ स्मार्टफोन बजारमा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले फिंगरप्रिन्ट सेन्सरसहितको पहिलो स्मार्टफोन कलर्स प्राइड पि–५० टच (Colors Pride P-50 Touch) बजारमा ल्याएको हो । नेपाली […]
काठमाडौं, २९ कात्तिक । विभिन्न रमाइला प्रतियोगिता गरिरहने जियोनिले ग्राहकवर्गलाई लक्षित गर्दै नयाँ प्रतियोगिता आफ्नो फेसबुक पेज जियोनि नेपालमा सार्वजनिक गरेको छ । चिनियाँ मोबाइल ब्राण्ड जियोनिले आफ्नो फेसबुक पेजमा […]
काठमाडौं, ५ वैशाख । कलर्स मोबाइलले शक्तिशाली ब्याट्री क्षमतासहितको इलिट सिरिजमा नयाँ स्मार्टफोन इ–१५ नेपाली बजारमा ल्याएको छ । कलर्सको इ १५ स्मार्टफोनमा ५००० एमएएच क्षमताको शक्तिशाली ब्याट्री एवं पावर […]
कलर्स के थ्री स्मार्टफोन किन्दा १०,००० एमएएचको पावरब्यांक उपहार
काठमाडौं, ७ चैत । कलर्सले ग्राहकहरुका लागि कलर्सको के थ्री स्मार्टफोन खरिदमा नयाँ अफर लागू गरेको छ । कलर्स पर्ल ब्ल्याक के थ्री (Colors Pearl Black K3) स्मार्टफोन खरिद गर्दा […]
जियोनिको सर्भिस सेन्टर सिटिसी मलमा, ‘पी ५ डब्लू” स्मार्टफोन छिटै अाउने
काठमाडौं, २८ पुस । जियोनिले सिटिसी मलको पाँचौ तल्लामा आफ्नो नयाँ सर्भिस सेन्टर संचालनमा ल्याएको छ । सुन्धारास्थित मलमा रहेको सर्भिस सेन्टर टेलिटक प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जय अग्रवाल, कम्पनीका […]
कलर्स मोबाइलका विभिन्न मोडलमा मूल्य कटौती
१४ मंसिर २०७२, सोमबार
काठमाडौं, १४ मंसिर । कलर्स मोवाइलले आप्ना विभिन्न मोडलका फोनहरुको मूल्य घटाएको छ । पर्ल ब्ल्याक सिरिज अन्तर्गतका दुई मोवाइल फोनको मूल्य घटाएको छ भने एक्स फ्याक्टर सिरिजका तीन मोडलहरुको […]
काठमाडौं, ८ वैशाख । एउटै क्षेत्रमा रहेका कम्पनीहरुबिच प्रतिस्पर्धा हुनु स्वभाविक मानिन्छ । तर कहिलेकाँही बजारमा आफ्नो पकड जमाउन निकै कडा प्रतिस्पर्धा पनि हुने गर्दछ । त्यस्तै उच्च प्रतिस्पर्धा नेपाली […]
जियोेनीको ‘मिस पपुलर च्वाइस भोट मलाई’
२९ चैत्र २०७१, आईतवार
काठमाडौं, २९ चैत । जियोनी मोबाइलले चैत्र २५ मा न्यूरोडको ताम्राकार कम्प्लेक्समा २०७२ साल वैशाख ४ गते हुन गइरहेको मिस नेपाल प्रतियोगीताको प्रबद्र्धनका लागि कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । २०१५ […]
जियोनीको ‘ईलाइफ एस७’ भारतमा भन्दा नेपालमा सस्तो हुने, बजार मूल्य ३८ हजार मात्र !
२३ चैत्र २०७१, सोमबार
काठमाडौं, चैत २२ । चीनियाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी जियोनीले भारतीय बजारमा आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन ईलाइफ एस ७ लन्च गरेको छ । कम्पनीले भारतीय बजारलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक गरेको नयाँ स्मार्टफोन […]
जियोनीको निकै आकर्षक र फरक देखिने ईलाइफ एस ७ सार्वजनिक
काठमाडौं, १९ फागुन । चीनियाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी जियोनीले बार्सिलोनामा आयोजना भईरहेको मोबाइल वल्र्ड कंग्रेसमा नयाँ स्मार्टफोन ईलाइफ एस ७ (Elife S7) सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले सार्वजनिक गरेको यो […]
होलीमा कलर्स मोबाइल किन्दा लखपति बन्ने योजना
काठमाडौं, १८ फागुन । कलर्स मोबाइलले होली पर्वको रंगीन अवसर पारेर यही फागुन १७ गतेदेखि बैशाख १७ सम्मका लागि कलर्स होलीको रङ्गमा लखपति अफर उपहार योजना संचालनमा ल्याएको छ । […]
काठमाडौं, २२ माघ । चीनियाँ मोबाइल फोन निर्माता कम्पनी जियोनीले निकै पातलो दुईवटा स्मार्टफोन ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । आगामी मार्चमा स्पेनको बार्सिलोनामा हुने वर्ल्ड मोबाइल काँग्रेसमा कम्पनीले नयाँ दुई […]
जियोनीले कृष्टल कोटिङ भएको ‘पी ६’ स्मार्टफोन ल्याउँदै
काठमाडौं, १४ माघ । चीनियाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी जियोनीले विविधवर्गका उपभोक्तामाझ थरिथरिका फोनहरुमा नयाँ प्रविधि ल्याउने क्रममा यसपालि पायोनियर पी ६ (Pioneer P6) स्मार्टफोन बजारमा ल्याउँदैछ । यो मोबाइलमा ५ […]
काठमाडौं, १२ माघ । कलर्स मोबाइलले विण्डोज अपरेटिङ सिष्टममा आधारित स्मार्टफोन सार्बजनिक गरेको छ । कलर्सले माइक्रोसफ्टसँग मिलेर आज काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पहिलो विण्डोज फोनको प्रि-लन्च गरेको हो । […]
भिडियो र तस्बिर उत्कृष्ट खिच्ने कलर्सको स्मार्टफोन बजारमा
काठमाडौं, १४ पुस । कलर्स मोवाईलले जुम सिरिज र पर्ल व्ल्याक सिरिजका फोन बजारमा ल्याएको एक हप्ता भित्र एक्सवानथर्टिन प्लस क्वाड (X113+ Quad) नामक अर्को स्मार्टफोन ल्याएको छ । क्वाडकोर […]
काठमाडौं, १० पुस । कलर्स मोवाईलले एक्स फ्याक्टर एक्स१२८ म्याजिक (X Factor X128 Magic) नामक नयाँ स्मार्टफोन बजारमा ल्याएको छ । यो स्मार्टफोन एन्ड्रोईड ४.४ किटक्याट अपरेटिङ सिष्टममा आधारित स्टाईलिस्ट […]
कलर्सको थ्रीजी सपोर्ट गर्ने मोबाइल सेट बजारमा
काठमाडौं, २४ मंसिर । कलर्स मोबाईलले मोबाईलमार्फत ईन्टरनेट चलाउन अत्यावश्यक थ्रीजी नेटवर्क सपोर्ट गर्ने नयाँ मोडलका सेट बजारमा ल्याएको छ । तीन वटा मोडलका सेटहरु उत्पादन गरिएको जुम सिरिजका यी […]
काठमाडौं, १९ मंसिर । कलर्स मोवाइलले नयाँ मोवाइल सेट नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । कलर्सको नयाँ फोन एफ००७ (F007) मोवाइल बलियो, आकर्षक र टिकाउ रहेको कम्पनीले दावी गरेको छ । […]
काठमाडौं, १४ मंसिर । चीनीयाँ स्मार्टफोन निर्माता कम्पनी जियोनीले एम सीरीजको मोबाइल फोन नेपाली बजारमा ल्याएको छ । लामो समयसम्म टिक्ने धेरै शक्तिशाली ब्याट्री भएको यो मोबाइल फोन अन्तराष्ट्रिय बजारहरुमा […]